Amathuluzi we-5 Azothuthukisa Imiphumela Yakho kusuka Kubhulogi | Martech Zone
NgoLwesibili, Novemba 11, 2014 NgoLwesine, ngoMashi 4, 2021 U-Ian Cleary
Ibhulogi ingaba ngumthombo omkhulu wethrafikhi kuwebhusayithi yakho, kepha kuyadla isikhathi ukudala okuthunyelwe kwebhulogi futhi asihlali siyithola imiphumela esiyifunayo. Uma wenza ibhulogi, ufuna ukuqiniseka ukuthi uthola inani eliphakeme kuyo.
Kulesi sihloko, sichaze amathuluzi ama-5 azosiza ekuthuthukiseni imiphumela yakho ekubhulogi, okuholele kuthrafikhi eningi futhi, ekugcineni, ukuthengisa.
1. Dala isithombe sakho usebenzisa i-Canva
Isithombe sithatha ukunaka kwakho futhi uma ungabambi izivakashi kubhulogi lakho ngeke basifunde. Kepha ukudala izithombe ezikhangayo, ezibukeka kahle ziyinselele enkulu futhi zidla isikhathi futhi, uma uthola usizo lochwepheshe, kuyabiza!
UCanva unjalo ithuluzi lokuklama imidwebo lokho kwenza ukuthi abantu abangenalwazi nabangenakho ukuzenzela bakwazi ukukhiqiza izithombe ngaphandle kwesidingo samakhono wokuqamba imidwebo.
Lapho usukhethe uhlobo lwesithombe ofuna ukusidala (okuthunyelwe kwe-Facebook, iphinikhodi ye-Pinterest, isithombe se-blog) ungakhetha kulabhulali yemiklamo yobungcweti enama-tweaks ambalwa angenziwa ngezifiso ukuze ivumelane nesitayela nezidingo zakho.
Mane uhudule bese uphonsa izithombe zakho ezilayishiwe kudizayini (noma khetha kulabhulali enkulu yezithombe zesitoko), sebenzisa izihlungi zokubamba iso, uzimboze ngombhalo nezinye izinto zokuqhafaza, nokunye okuningi.
Khetha idizayini bese wenza ngezifiso izithombe, imibala, nombhalo
Kukho konke okuthunyelwe kubhulogi qiniseka ukuthi unesithombe okungenani esisodwa esidonsela umfundi wakho ngaphakathi. I-interface elula yomsebenzisi enembile ye-Canva kulula ukuyazi ikunika amandla okwenza izithombe ezithinta amehlo kokuthunyelwe kwakho kwebhulogi kungakapheli imizuzu. Uma uchitha isikhathi esithile neCanva, uzozibuza ukuthi wake wasinda kanjani ngaphandle kwaso.
2. Cwaninga Izimbangi Zakho Usebenzisa Semrush
Ukuza nemibono yokuthunyelwe kunzima ngokwanele kepha ukwazi ukuthi iziphi ezizokulethela ithrafikhi kungaba nzima. Ukwazi ukuthi yini okusebenzela izimbangi zakho kunganikeza imininingwane ebalulekile nemibono yebhulogi lakho.
Ukusebenzisa Semrush ungangena kukheli lakho lembangi lembangi lakho bese ubheka uhlu lwamagama aphezulu abawaklelise ku-Google. Ungawabona amagama angukhiye, usesho olulinganiselwe lwalawo magama abalulekile nokunye okuningi.
Uma izimbangi zakho zithola ithrafikhi yalawa magama angukhiye mhlawumbe kunethuba lokubhala okuqukethwe okuqondiswe kulawo magama angukhiye ukuze uthathe ithrafikhi yabancintisana bakho!
Kepha khumbula, lokhu akumayelana nokukopisha esincintisana naye. Ungakha i-athikili yakho nxazonke zamagama abalulekile kepha okuqukethwe kufanele kwehluke. Ufuna ukubhala i-athikili engcono kakhulu kunabancintisana nabo bese uyayithuthukisa. Ngophenyo oluthile ku Semrush uzofunda okuningi mayelana nabancintisana nabo futhi lokhu kuzokusiza ukuthi uzuze imiphumela eminingi ngokubhuloga kwakho.
3. Khulisa isilinganiso sokuguqulwa sokubhaliselwe kwe-imeyili usebenzisa ukuphuma kokuzivelelayo
Uma ufuna ukwakha izithameli eziqhubekayo zebhulogi yakho uhlu lwe-imeyili lubaluleke kakhulu. Kepha sekuya kuba nzima ukuheha izivakashi zewebhusayithi yakho bese ubaqinisekisa ukuthi babhalise noma babhalisele ukuguqulelwa ku-imeyili yakho.
Indlela enhle yokubamba ukunaka kwabo ibhokisi lokuzivelelayo elicela ikheli labo le-imeyili. Kepha amabhokisi we-popup angangena futhi abangele ukucasula ngenkathi upheqa iwebhusayithi.
Indlela ehlanzekile nephumelelayo ezungeze lokhu isebenzisa okuzivelelayo okufuna ukuphuma, okuthola lapho ushiya isayithi bese kukhombisa okuzivelelayo. Ungahle ubhekabheke isayithi amahora bese kungenzeki lutho kepha lapho nje uzama ukushiya iwebhusayithi kuzovela okuzivelelayo.
OptinMonster iyithuluzi eliwusizo kakhulu le-WordPress elisekela okuzivelelayo ngenhloso yokuphuma. Enye indlela ye-OptinMonster yile ISomome engatholakali ku-WordPress kuphela kepha ingasetshenziswa nakwamanye amapulatifomu.
4. Sebenzisa Izinketho Zokwabelana Okuhle
Lapho izivakashi zithola okuqukethwe kusayithi lakho okungaba wusizo kuzithameli zazo ufuna ukwenza kube lula ukuthi zikwabelane ngakho. Lokhu kusho ukuthi ukwabelana ngezithonjana kubonakala kakhulu kuwebhusayithi yakho, ngakho-ke uma isimo sesithathile, kukuchofoza nje kude.
I-flare ikuvumela ukuthi ufake imigoqo yokwabelana mpo futhi enezingqimba kokuthunyelwe kwakho. Ngenkathi uskrolela phansi ngeposi izithombe zokwabelana zihlala zibonakala ngaso sonke isikhathi. Muva nje bangeze kangcono analytics ungene epulatifomu ngakho manje ungabona ukuthi yikuphi okuthunyelwe okuthola amasheya amaningi uma kuqhathaniswa nokuvakashelwa. bangobani abagqugquzeli abakhulu ababelana ngokuthunyelwe kwakho, nokunye okuningi.
Futhi banokwabelana okusebenziseka kalula kubasebenzisi bakho beselula.
Ukwabelana ngomakhalekhukhwini kuya ngokuya kubaluleke kodwa udinga ukuqiniseka ukuthi kulula ukwabelana ngakho.
5. Yabelana ngokuqukethwe kwakho okudala nge-Buffer
Imvamisa, sigxila ekukhuthazeni okuqukethwe kwethu okusha bese sikhohlwa inani elikhulu lokuqukethwe esivele sinakho kuwebhusayithi yethu okusasebenziseka futhi okuyigugu. Uma unokuqukethwe okuhlala kuluhlaza (okuqukethwe okungaphumi esikhathini) kungani ungabelani ngaso njalo.
Lezi yizinhlobo eziphelele zokuthunyelwe ukulungiselela nokuhlela kusengaphambili futhi isikhumbulo sesikhana iyithuluzi elihle lokuphatha lokhu. Okokuqala, uchaza izikhathi ofuna ukuthumela ngazo iziteshi zakho zenhlalo (i-Facebook, i-Twitter) bese umane ungeze okuthunyelwe kulayini wakho okulungele ukwabiwa ngesikhathi esilandelayo esitholakalayo. Ithuluzi elihambisanayo ku-Buffer Bulkbuffer okukuvumela ukuthi ulungiselele konke okuthunyelwe kwakho kuspredishithi bese ukungenisa ku-Buffer ukuze kungezwe ngokuzenzakalela kulayini.
Khetha okuqukethwe kusayithi lakho okusasebenza bese udala ispredishithi ngezibuyekezo ofuna ukuzaba, bese ungenisa lokhu ku-Buffer ukuze kwabelwane ngakho kalula nangokuzenzekelayo.
Ibhulogi yakho iyimpahla ebalulekile yebhizinisi lakho futhi ngokutshala isikhathi esithile ungayithuthukisa ngokuphawulekayo imiphumela yebhulogi yakho. Kulesi sihloko sichaze izindlela ezi-5 ongakwenza ngazo lokhu. Iyiphi ozoyisebenzisa? Ingabe kukhona ongathanda ukukungeza?
Isisekelo Sokumaketha Okuhle Nokubi
Nov 13, 2014 ngo-2: 17 AM
Yups…. ukubhuloga kuyithuluzi elihlukile lokuthola imiphumela echumayo. Akungabazeki ukuthi kuningi kakhulu ukubhala ibhulogi elihlaba umxhwele .Kodwa uma yehluleka ukunaka, khona-ke yonke imizamo yakho iyize. Kuzolunga ukubeka umzamo omncane nesikhathi ekubhulozeni ukuze kuqoqwe isixuku ngaphezulu kwezinto zakho ezibhaliwe.
Lawa mathuluzi, uma esetshenziswa ngobuhlakani azothela kakhulu .Kakhulukazi kwabaqalayo nakubantu abangenalwazi, la mathuluzi asebenza njengenhlanhla.
Ngakho-ke, sibonga kakhulu ngokusazisa ngalawa mathuluzi okwenza umsebenzi omuhle ekutholeni ukunakekelwa kwezivakashi.
Nov 13, 2014 ngo-2: 26 AM
Nov 17, 2014 ngo-7: 07 PM
Isihloko esihle u-Ian. Ngiyafuna futhi ukwengeza ukuthi ukuqonda izithameli zakho nokubhala okuqukethwe okuhambisana nezidingo zezithameli zakho kubalulekile empumelelweni!